लुम्बिनीका दाङ, बाँके, रोल्पा, रूकुमपूर्व र प्यूठानका प्रमुख पदमा क–कसले लिए उम्मेदवारी फिर्ता? :: नारायण खड्का :: Setopati
लुम्बिनीका दाङ, बाँके, रोल्पा, रूकुमपूर्व र प्यूठानका प्रमुख पदमा क–कसले लिए उम्मेदवारी फिर्ता?
दाङ, वैशाख १७
दाङमा शुक्रबार १ सय ७६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
जिल्लाका दश पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ९६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका धर्मराज पाण्डे र घोराही उपमहानगरपालिकामा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका श्रीमनकुमार न्यौंपानेले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिमा १८ जना, लमही नगरपालिमा ७ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
त्यस्तै बबई गाउँपालिकामा १४ जना, दंगीशरण गाउँपालिकामा १३ जना, शान्तिनगरमा ५ जना, बंगलाचुलीमा १ जना, राजपुर गाउँपालिकामा ५ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ९ जना र गढवा गाउँपालिकामा ८ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ।
दंगीशरणमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार २ जना, वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका २ जना लगायत, राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका १/१ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। राप्तीमा थप तीन जना वडाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार लगायतले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
त्यस्तै बबई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका १ जना, वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार ४ जना लगाएतले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
शान्तिनगरमा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार २ जना, बंगलाचुलीमा स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका १ जना, लमही नगरमा वडाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार १ जना लगायतले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै गढवा गाउँपालिकामा २ जना स्वतन्त्र पदका उम्मेदवारलगायतले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते आह्वान गरिएको मनोनयन दर्ताको समयमा दाङका दश पालिकाको १०० वडाका ५२० पदका लागि झन्डै पाँच गुणा बढी २४१२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो।
दाङमा ४ लाख ९ हजार ९ सय जति मतदाता छन्।
बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्रबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी एक महिलाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छन्।
माओवादी केन्द्रकी उनले यसअघि पाँच दलीय गठबन्धन अनुसार माओवादीको भागमा नेपालगञ्जको मेयर/उपमेयर पद नपरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्।
उनीसँगै नेपालगञ्जमा ६ जना वडाध्यक्ष, ३ महिला सदस्य, २ सदस्य र थप १ जना दलित सदस्यले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै नेपालगञ्जजमा एक वडा अध्यक्ष र दुई वडा सदस्यको उम्मेदवारी रद्द भएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
नेपालगञ्जज– १७ मा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका अजयकुमार पाठकको उम्मेदवारी रद्द भएको छ।
उनलाई बैंकले कालो सूचीमा राखेको थियो। त्यस्तै नेपालगञ्ज-३ मा दलित सदस्य पदका उम्मेदवार निर्मलादेवी वंशाकार र वडा नं. ७ मा सञ्जु वंशाकारले आवश्यक काजजात उपलब्ध उपलब्ध नगराएका कारण उनीहमरुको उम्मेदवारी पनि रद्द भएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बलराम शर्माले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शर्माले टिकट नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका थिए। कोहलपुरमा सबै गरि १६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
रोल्पामा ११४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
त्यसमध्य १७ जना प्रमुख/ उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरु छन् ।
जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये रोल्पा नगरपालिकामा प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका १ जना र २ जना उपप्रमुखले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।
त्यस्तै १६ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र ११ जना उपाध्यक्षले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ३१ वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
रोल्पामा कुल ७२ वडा रहेका छन् ।
रूकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका भिमबहादुर ओलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारी दिएका ओलीले शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ओलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि अब माओवादी केन्द्रका होमप्रकाश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कमान पुन र मंगल नेश्नल अर्गनाइजेसनका रतन पुनको मात्रै उम्मेदवारी छ।
यहाँ यसअघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा चुनाबी तालमेल गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यही भएर यहाँ कांग्रेसले उपाध्यक्ष पदमा पनि उम्मेदवारी दिएको थिएन। त्यसैले यहाँ उपाध्यक्ष पदमा भने एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका कमानसिङ डाँगीको मात्रै उम्मेदवारी कायम छ। तर, अन्तिममा आएर गठबन्धन भित्रको माओवादीलाई समर्थन गर्दै ओलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। ओलीको उम्मेदवारी फिर्ता भएपछि माओवादीका श्रेष्ठलाई सहज भएको अनुमान गर्न थालिएको छ।
प्युठानको झिमरूकको अध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गरेका नेकपा एमाले उम्मेदवार हुकुमबहादुर खड्का र उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गरेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रुपमा जिसीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्।
झिमरूकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएपछि उनीहरुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्।
यी दुई दलको तालमेल अनुसार अब अध्यक्षमा माओवादीका पितबहादुर एमसी र उपाध्यक्षमा एमालेकी बिष्णु घर्तीको उम्मेदवारी कायम रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार झिमरूकमा माओवादीले अध्यक्षसहित ३ वटा वडाध्यक्ष, एमालेले उपाध्यक्षसहित ५ वटा वडाध्यक्ष लिने सहमति भएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १६, २०७९, २१:४६:००